238 Arday Oo Ka qalinjabisay Kuliyada Godey Poly-technic - Cakaara News
238 Arday Oo Ka qalinjabisay Kuliyada Godey Poly-technic
Godey(cakaaranews)Talaado 20ka June 2017. Arday tiradoodu dhantahay 238 arday ayaa kaqalinjabiyay kuliyada Godey Polytechnic kuwaasoo baratay culuumta kala ah barashada caafimaadka xoolaha, waxsoosaarka xoolaha, khayraadka dabiiciga ah, waxsoosaarka beeraha, ICT iyo nidaamka iskaashatooyinka beeraha.
Hadaba, qalinjabintan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay gudoomiyha gobolka shabeele mudane Farxaan Cabdi Maajuun oo ugu horayn qalinjabiyayasha uhanbalyeeyay islamarkaana sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay inuu manta kalsooqaybgalo xafladooda qalinjabinta. Wuxuuna kuladaradaamay in cilmigii ay barteen ay uga faaiideeyeen bulshadooda islamarkaana ay noqdaan kuwa diyaar u ah meelwalba oo lagu qoro.
Dhankiisa,kusimaha maareeyaha kuliyada xirfadaha iyo farsamooyinka gacanta ee godey Polytechnic ahna maareeye kuxigeenka kuliyada mudane C/qaadir Maxamed Cali ayaa halkaas kasoojeediyay khudbaad dheer oo kahadlaysa taariikhdii kuliyada. Wuxuuna sheegay kusimuhu in ardayda maanta qalinjabinaysa ay tiradoodu dhantahay 238 arday oo isugujira gabdho iyo wiilal. Wuxuuna tilmaamay maareeyuhu in ardaydani ay isugujiraan heerarka 3aad, 4aad iyo 5aad kuwaasoo bartay culuumaha kala ah, barashada caafimaadka xoolaha, waxsoosaarka xoolaha, khayraadka dabiiciga ah, waxsoosaarka beeraha, ICT iyo iskaashatooyinka beeraha.
Masuulka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in kuliyadu ay soo martay marxalado iyo heerar kaladuwan islamarkaana ay kaqalinjabisay arday tiradoodu kor udhaafayso 3762 arday oo baratay culuumaha kala duwan.
Ugudanbayna qalinjabiyaashii oo dareenkooda cabiraya ayaa sheegay in maanata ay tahay maalin ay aad ufarxasanyihiin islamarkaana ay heleen cnatiijada cilmigii aybaranayeen mmuda 2 sano iyo 3 sano.